Tirinta codadka doorashada Kenya oo maalintii seddaxaad gashay - BBC News Somali
Tirinta codadka doorashada Kenya oo maalintii seddaxaad gashay
Wararkii ugu dambeeyay ee doorashada Kenya
Tirinta codadka doorashadii Talaadadii ka dhacday dalka Kenya ayaa wali socoto iyadoo madaxweynaha haatan xilka haya, Uhuru Kenyyatta uu hoggaaminaya natiijooyinka hordhaca ah ee ilaa iyo hadda soo baxay. Ilaa iyo hadda 54% codadkii la tiriayay ayuu helay Kenyatta halka hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga uu helay 44%.
Balse Odinga ayaa ku gacanseyray natiijooyinka hordhaca ah isagoo ku dooday in hanaaanka kombuterada ee guddiga loo jabsaday si codadla loogu shubo madaxweyne Uhuru Kenyatta.
Deegaanka Tana River ee koonfur bari Kenya, booliska ayaa dilay labo qof ka dib markii ilaa shan qof ay weerareen xarun lagu tirinayay codadka oo ay tooreey ku dhufteen hal qof.
Goobjoogayaasha caalamiga ah ayaa soo saaray war qoraal ah oo ay ku dalbanayaan xasilooni inta ay tirinta codadka socoto.
Madaxa fulinta guddiga doorashada Kenya, Ezra Chiloba, ayaa sheegey in hanaanka combuuterada ee guddiga aan loo dhicin saacada ka dib markii guddoomiyaha guddigaasi uu sheegay in eedeyntaasi baaritaan lagus ameyn doono.
Chiloba, ayaa sheegey in natiijooyinka hadda lasoo gudbiyey aysan ahayn kuwa rasmi ah, kuwa rasmigana ay yihiin kuwa ku qoran foomamka gacanta ku qoran ee laga soo gudbin doono goobaha codka laga dhiibtey.
Image caption Fred Matiang'I wasiirka amniga gudaha Kenya
Wax yar ka dib markii uu Raila diiday natiijooyinka hordhaca ah ayaa rabashado goos goos ah waxa ay ka dhaceen xaafad ka mid ah magaalada Nairobi iyo Kisumu.
Wariye BBC-da ka tirsan oo ku sugan magaalada Kisumu ayaa soo tabiyey in Arbacadii uu arkay boqolaal qof oo muhaadaraad ka dhigay xaafad ka tirsan magaalada kuwaasi oo ku dhawaaqayay "Raila la'aantiis, nabad ma jirto", balse markii dambe ay booliiska kala eryeen.
Mr Odinga ayaa saxaafada u sheegay in natiijada ka soo baxaysa doorashada ay tahay"mid been abuur ah",sababtoo ah buu yiri lama keenin dikumiintiyo cadaynaya natiijada.
Image caption Wafula Chibokati guddoomiyaha IEBC
Dad badan ayaa ka cabsi qaba in ay dalka ka dhacaan rabshado la mid ah kuwii ak dhacay 10 sano ka hor.
Muxuu ka cabanayaa Mr Raila ?
Mucaaradak ayaa natiijada la baahiyay ku tilmaamay been abuur sabtoo ah natiijada ma wehelin foomamka xarumaha codaynta ee loo yaqaano foom 34A iyo 34B.
"Waa khiyaali ,waa been abuur,"ayuu ku nuuxnuuxsaday Mr Odinga.
Dhanka kale weli waxaa socota tirinta codadka doorashada Kenya, codadka horudhaca ee ilaa iyo imika la tiriyayna waxay muujinayaan in madaxweyne Uhuru Kenyatta uu ku horreeyo boqolkiiba konton iyo shan codadkii la tiriyay. Guddiga doorashada waxaa kale oo ay shegeen in la tiriyay saddex meelood labo meel goobihii ay dadka ka dhiibteen codadka.
Sida ay muujinayaan tirooyinka kasoo baxaya xarunta dhexe ee natiijada guddiga doorashooyinka, illaa toban milyan iyo bar cod ayaa la tiriyey marka aan warkan daabacaynay, waxayna labada musharax ee ugu muhiimsan kala heleen, Uhuru oo heysta 55% boqolkiiba, iyo Odinga oo heysta 44%. Guddiga doorashada ayaa ku booriyay shacabka inay ka dhowrsugaan natiijada kama dambeysta, waxaana welii guud ahaan dalka Kenya ka socda tirinta codadka doorashada.
Xarunta Bomas ee ay tirinta ka socoto waxaa ku sugan safiirada Maraykanka, UK iyo dalal kale oo aad u danaynaya doorashada Kenya iyo waliba kormeerayaasha.
Sida weyn ee loogu soo baxay codbixinta doorashada Kenya ayaa ah mid muujinaysa"in dimuqraadiyada Kenya ay qaangaadhay", waxaa sidaasi sheegay afhayeenka dowlada Kenya,Eric Kiraithe.
"Safafka waxay ahaayeen kuwa la yaab leh ,xaqiiqadii Kenyanka aad ayay u soo baxeen si ay u codeeyaan,".ayuu yiri Kiraithe.
Afhayeenka ayaa amaanay saraakiisha guddiga doorashada iyo xuduudadaha(IEBC),oo uu sheegay iney si wanaagsan u qabteen shaqdooda.
Mar uu ka hadlayay dib u dhaca meelaha qaar ee ay sababeen xaaladaha cimilada ,waxa uu sheegay inay dowlada diyaar u tahay in ay gacan siiso guddiga doorashada.
Afar siyaabood oo doorashada Kenya ay saameyn ugu yeelan karto Soomaaliya
Kenya oo xasiloon maalin ka hor doorashada
Codbixiyayaasha xaafadda Islii ee oo safaf dhaadheer ku jira
Image caption Kenyatta ayaa ku baaqay in dalku uu midoobay
Image caption Odinga ayaa shaki ka muujiyay in uu cabsi ka qabo in lagu shubto
Si uu musharaxu ugu guulaysto jagada madaxwaynaha wareega kowaad, waxaa looga baahan yahay boqolkiiba 50 lagu daray 1(50+1)oo ka mid ah codadka la dhiibtay.
Doorashadii aanu soo dhaafnay Mr Kenyatta ayaa ku guulaystay doorashada isaga oo helay 50.51 boqolkiiba halka Mr Odinga uu helay 43.7 boqolkiiba.
Haddii la waayo musharrax hela boqolkiiba 50 iyo hal cod , wareeg labaad ayaa la galayaa ,waxana ay tahay in doorashada wareega labaad la qabto mudo 30 maalmood gudahood ah.
Gudiga doorashada ayaa waxa ay sharciyan haystaan in muddo 7 maalmood gudahood ah ay ku dhhwaaqaan natiijada madaxwaynanimada.
Maxaa sababay in ay dad badan ka qaxaan Nairobi ka hor doorashada ?
Toban sano kahor waxa jiray rabshado argagax leh oo ka danbeeyay doorashooyinkii waddanka ka dhacay, qofne ma doonayo inay soo laabtaan rabshadahaasi.
2013-kii Raila Odinga waxa uu dacwad u gudbiyay maxkamadda isagoo ka cabanayay in doorashada la xaday. Xiligan waa markiisii afaraad, waxayna u muuqataa iskudaygisii ugu danbeeyay ee ku noqonayo madaxweyne, waxa suurtagal ah inuu ku baaqo in taageerayaashiisa ay wadooyinka isugu soo baxaan haddii uu arko in codadka doorashada la xaday.
Muuqaal ku saabsan ahmiyadda doorashada kenya